Izinwele zezinwele eziningi kakhulu zonyaka omusha we-2018 ngezinwele ezimfushane
Kuhle kangakanani ukubeka izinwele ezimfushane? Izitayela zithi: kulula kakhulu kunalokho kubonakala. Ukudala okuncane, ukubekezela, isitayela kusho - futhi ikhanda lakho lezinwele lizodlula konke okulindelwe.
Isitayela esinemfashini sezinwele ezimfushane
Indlela elula yokwenza i-style styling - enikeza izinwele ezimfushane inani elingenandaba. Udinga kuphela ukuphatha izimpande zezinwele nge-mousse noma u-crayp spray, bese-unikeza izinkomba ukuma ngendlela efanele nge-dryer hair kanye ne-brush nxazonke. Sebenzisa ukulungiselelwa kwemoya epholile, ukomisa izinwele zakho kusuka ezimpandeni kuya ezitheni. Uma kunesidingo, sebenzisa i-wax kwezinye izinto ezingavumelekile. Iziqu ezinjalo zibukeka kahle kakhulu ekuqothulweni kweziqu, ukugudluza kanye nokushaya izinwele.
Ukubunjwa kwenqwaba yezinwele ezimfushane
Izitayela zezinwele ezinezinsimbi namagagasi
Izinketho ezingaphezu kwesifazane - isitayela esinama-braids, ama-harnesses nama-curls ezinwele ezincane. Ngisho nezimpande ezincane-ezincane zingahle zikhishwe kancane, zihlelwe ngokungahleliwe enqwabeni enhle, isikhwama esihle noma eqoqwe ukubopha ezintathu. Abathandayo isitayela se-retro bangazama ikhanda elihle elibushelelezi noma amagagasi "abandayo". Ukugijima ngeke kube nzima: sebenzisa izinwele ezincibilikayo zokuthunga i-gel noma i-Foam, zihlanganise nabo engxenyeni ye-oblique. Isitayela esimnandi silungile. Uma unquma ukuqhubeka - yakha amagagasi "flat" ngeminwe yakho kanye nezikhalazo, vumela izinsimbi zome futhi zilungise umphumela nge varnish.
Umdwebo wesifazane wezinwele ezimfushane
Izitayela zezinwele nezemihlobiso
Ungayinaki izinwele izesekeli: i-barrettes, ama-hoops, ama-bandage, ama-band-band e-volumetric nama-hairpin okuhlobisa akugcini nje ubuhle izinwele, kodwa futhi alungise ngokuphepha. Ungakhohlwa ngama-twisters nama-hair compact - azokwenza umdwebo othakazelisayo ngaphandle komzamo omkhulu.
Ukuthakazelisa ngokuhlobisa ngezinwele ezimfushane
I-ultrasonic cavitation (liposuction) e-cosmetology - iyini le nqubo (ukubuyekezwa nezithombe ngaphambi nangemva)
Izimfihlo zobuhle zabesifazane: isitayela, isithombe nemfashini
Izinto ezingu-10 ezongeza iminyaka
4 Best Moisturizers for Winter
Ubulili enkampanini: uyavuma noma wenqaba?
Abaxhasayo - izesekeli zesekhwalini ekhabethe labesifazane 2014
Impahla yamafutha abalulekile e-mustard
I-Lemon Face Mask
Indlela yokunikeza i-arthritis kufanele ikhumbule ngokufanele
Inqama ye-horoscope yezocansi
Spring izingadi kuqoqo lezinhlobonhlobo zezimhlophe ze-Mercury Flowers
Ukushayela nge-chocolate cream cream
Inzuzo Yonyaka Yonyaka Ye-Parsons School
Vareniki enobuqili nge imbewu poppy
Izimfihlo zokuheha abesifazane
Njengabangu-50 bazizwa benempilo futhi benenjabulo kunalesi-25